Ch 3 Mark – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Mak / Ch 3 Mark
3:1 Na ọzọ, ọ banyere n'ụlọ nzukọ. Na e nwere otu nwoke nke nwere aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ.
3:2 Na ha hụrụ ya, ahụ ma ọ bụrụ na ọ ga-agwọ ọrịa n'ụbọchị izu ike, ka ha wee bo ya ebubo.
3:3 O we si nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, "Guzoro n'etiti."
3:4 Na ọ sịrị ha: "Iwu ọ kwadoro ime ihe ọma na-izu-ike, ma ọ bụ ime ihe ọjọọ, inye ike na a ndụ, ma ọ bụ ibibi?"Ma ha kpuchiri ọnu.
3:5 Na-achọ gburugburu na ha iwe, a na-nnọọ wutere n'elu isi nke obi ha, ọ sịrị nwoke ahụ, "Ịgbatị aka gị." O akp o, na aka-ya e weghachiri ya.
3:6 Ndi-Farisi, -aga, ozugbo natara ndụmọdụ na Herodians megide ya, otú ha wee gbuo ya.
3:7 Ma Jizọs laghachi na-eso ụzọ ya na oké osimiri. Na a oké ìgwè mmadụ sooro ya si na Galili na Judia,
3:8 na site na Jerusalem, na site na Idumea na n'ofe Jọdan. Na ndị gburugburu Taya na Saịdọn, nụrụ ihe ọ na-eme, bịakwutere ya a oké ìgwè.
3:9 Ma ọ gwara eso ụzọ ya na a obere ụgbọ mmiri ga-bara uru ya, n'ihi ìgwè mmadụ, ka ha ghara pịa ya.
3:10 N'ihi na ọ gwọrọ ọtụtụ, na dị ka ọtụtụ n'ime ha ka nwere ọnyá ga-ọsọ ya iji metụ ya aka.
3:11 Na-adịghị ọcha ndị mmụọ, mgbe ha hụrụ ya,, dara n'ala n'ihu ya. Ha wee tie mkpu, si,
3:12 "Ị bụ Ọkpara Chineke." O ike dụrụ ọdụ ha, ka ha ghara ime ka a mata.
3:13 Na-arịgo n'elu a ugwu, he called to himself those whom he willed, and they came to him.
3:16 o nyekwara iwu na Simon aha Peter;
3:17 na ọ machibidoro James Zebedi, na Jọn nwanne Jems, aha 'Boanerges,'Nke bụ, 'Ụmụ Égbè Eluigwe;'
3:18 na Andrew, na Philip, na Bartholomew, na Matthew, na Thomas, na James Alfiọs, na Thaddeus, na Simon Kenean,
3:19 na Judas Iskarịọt, ndị na-arara ya.
3:28 Amen m asị unu, that all sins will be forgiven the sons of men, and the blasphemies by which they will have blasphemed.
3:31 Ya na nne ya na ụmụnne rutere. Na guzo n'èzí, ha we zigara ya, akpọ ya.
3:32 Na ìgwè mmadụ nọ ọdụ gburugburu ya. Ha we si ya, "Lee, gị na nne gị na ụmụnne gị na-n'èzí, na-achọ gị. "
3:33 Na-aza ha, o kwuru, sị, "Ònye bụ nne m na ụmụnne m?"
3:34 Na-achọ gburugburu na ndị nọ ọdụ gburugburu ya, o kwuru, sị: "Lee, nne m na ụmụnne m.
3:35 N'ihi na onye mere uche Chineke, otu bụ nwanne m nwoke, na nwanne m nwaanyị na nne m. "